Entries posted by admin	Two Minnesota women sentenced in Somali terror case in U.S. District Court
Continue reading …	Raisul-wasaare Saacid oo qoraal kasoosaaray arinka jubbaland
Muqdisho:-(RT)Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Raysal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa lagu muujiyey sida xukuumadu ay xilligan uga soo horjeedo dhistaanka maamul loo sameeyo Jubooyinka iyo Gedo. Warsaxafadeedkan ka soo baxay xukuumadda Somaaliya ayaa qornaa sidatan: Ayadoo Ia llaalinayo dastuurka dalka ee qeexaya qaab-dhismeedka dawlad-goboleedyada dalka ee nidaamka federaaliga ah. Lana dhawrayo geedi socodka [...]
Continue reading …	Maxkamad Maraykanka ah Oo ku Xukuntay Somali 20,10,Sano
Minneapolis:-(RT)Galabnimadii Danbe ee maanta oo ahayd Isniin ayaa waxaa Maxkamad Minneapolis ku taala ay 20 Sano ku xukuntay Mohamud Said Omar oo 47 , halka ay Kamaal 10 Sano ku xukuntay. Ragan la xukumay ayaa lagu eedeeyay in ay ka danbeeyeen dhalinyaro Reer Minesota ah oo u baxsaday Somalia si ay uga barbar dagaalamaan Kooxda Al-Shabaab. sido kale waxaa la [...]
Continue reading …	Page 1 of 266123Next ›Last »	Home